रोचक – Page3– mero sathi tv
पति-पत्नीबीच तनाव छ ? यसरी गर्नुस् समाधान
२६ चैत्र २०७४, सोमबार १३:४० April 9, 2018
LeaveaComment on पति-पत्नीबीच तनाव छ ? यसरी गर्नुस् समाधान
यदी श्रीमान श्रीमतीबचको सम्बन्धमा तनाव छ भने यसमा तपाईहरुबीचको सम्बन्धले मात्र काम गरेको हुदैन । दुईजनाबीचको असमझदारीका कारण यस्ता समस्या आउनुको एउटा प्रमुख कारणमा वास्तु दोष पनि रहेको बताइन्छ । जसको हलका लागि तपाईले वास्तुका नियमलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बेडरुम लोकेसन बेडरुम सधैं दक्षिण पश्चिम वा उत्तर पश्चिम दिशातर्फ हुनुपर्छ । यसले पार्टनरबिच माया र […]
राशी अनुसार यी बर्षहरुमा तपाईको भाग्य चम्कन्छ
२६ चैत्र २०७४, सोमबार ०८:१६ April 9, 2018
LeaveaComment on राशी अनुसार यी बर्षहरुमा तपाईको भाग्य चम्कन्छ
स्याहार सुसार गर्नु पर्ने, डुलाउनु पर्ने, खुवाउनु पर्ने अनि दिसापिसाब समेत गराउनु पर्ने झन्झट उठाएरै पनि घरमा जनावर पाल्नुका आफ्नै फाइदा छन्। कसैको शोख अनि कसैको बाध्यता, घरमा पाल्तु जनावर सबैको नभए पनि चाहाना भने अधिकांसले गर्छन्। एक्लै बस्नेलाई साथी पनि हुने, यस्ता जनावरलाई हिन्दु धर्ममा शुभ, धन, स्वास्थ्य आदीको प्रतिकको रुपमा पनि लिइन्छ। शास्त्र […]
यी चार राशि भएका मानिसहरुमा हुन्छ यस्तो अचम्मको क्षमता
२६ चैत्र २०७४, सोमबार ०८:०९ April 9, 2018
LeaveaComment on यी चार राशि भएका मानिसहरुमा हुन्छ यस्तो अचम्मको क्षमता
ज्योतिषी भाषा मान्ने हो भने तपाई हाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ । तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो कुरा राशिले स्वतः दर्शाउँछ । आधुनिक युगमा जीइरहेकाले हामी ज्योतिषीसँग खासै सरोकार राख्दैनौं । तर, सत्य यो पनि हो कि जो समस्या जोतिषीद्वारा हल गरिन्छ, त्यो अन्य उपायबाट समाधान हुन सक्दैन । कुनै पनि व्यक्ति […]
एक जोडीको संसार रूहाउने प्रेम कथा….पुरा पढ्नुहोस…
२६ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:५७ April 9, 2018
LeaveaComment on एक जोडीको संसार रूहाउने प्रेम कथा….पुरा पढ्नुहोस…
एक जना केटा र केटि बर्षौ देखिका साथी थिए सायद साथी भन्दा अलि बढी होला जो घन्टौ फोनमा कुरा गर्थे अनि सयौ sms पनि…., एक दिन् केटाले दिनभरी न त फोन गर्यो न sms नै केटि आश्चर्यमा परि उसलाई आफुले केहि गल्ति गरे की भन्ने पनि भयो फलत रात भरि निदाउन सकिन बस उसैलाई सम्झीरही […]
२६ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:५० April 9, 2018
LeaveaComment on कुन बार जन्मिएको मानिसको भविष्य र आचरण कस्तो हुन्छ ? (पत्ता लगाउनुस् आफ्नो भविष्य)
मानिसको जन्मेको समय र उसको वातावरणले उसको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । कुन बालक कुन बार र समयमा जन्मेका हुन्, उनीहरुको उक्त साइतले स्वाभाव र चरित्र निर्धारण गर्ने ज्योतिषहरुले बताउने गरेका छन् । त्यसैले कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको जीवनको विकासक्रम कसरी अगाडि बढेको हुन्छ । त्यसलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ […]
२६ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:४८ April 9, 2018
LeaveaComment on सोमबार जन्मेका मानिसको भविष्य र आचरण
सोमबार जन्मेका मानिसको भविष्य र आचरण । ज्योतिषशास्त्र भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतनमाथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अद्वितीय विज्ञान हो। ज्योतिषशास्त्रको काम भविष्यवाणी गर्नु हो । जन्मेको समय र उसको वातावरणले उसको भविष्य निर्धारण […]
श्रीमान र श्रीमती वीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने उपायहरु !
२६ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:४५ April 9, 2018
LeaveaComment on श्रीमान र श्रीमती वीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने उपायहरु !
श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् भनिन्छ । जीवनमा यी दुईको वीचमा मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्दछ । श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने केहि टिप्सहरु यस प्रकार छन : १. माया देखाउनु तपाई सँधै आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीलाई माया देखाउनुहोस् । सँधै दयालु […]
२६ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:४१ April 9, 2018
LeaveaComment on ज्योतिषशास्त्र अनुसार यी दुई राशिविच प्रेम अनि विवाह कहिल्यै सफल हुँदैन
ज्योतिषशास्त्रको अनुसार प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन् । कुनै–कुनै राशिबिचको सम्वन्ध एकदमै नराम्रो हुने र उनीहरु विचको सम्वन्ध कहिन्यै राम्रो नहुने हुनाले प्रेम र विवाह गर्न नहुने सुझाव दिइन्छ । भने केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै मेलमिलाप पनि हुने हुन्छ । जान्नुहोस्, जुन राशिहरुबीच प्रेम वा विवाह गर्नु नराम्रो मानिन्छ : मिथुन […]
श्रीमान–श्रीमतीले एकअर्कालाई कहिल्यै भन्न नहुने यी ५ कुरा !
२६ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:३८ April 9, 2018
LeaveaComment on श्रीमान–श्रीमतीले एकअर्कालाई कहिल्यै भन्न नहुने यी ५ कुरा !
बिवाह भइसकेपछि श्रीमान–श्रीमतीले आफ्नो वैवाहिक जीवन सन्तुलित राख्नको लागि संधै सचेत हुनुपर्छ । पतिपत्नी बीच कहिलेकाहीँ झगडा त भइहाल्छ तर त्यही झगडाको कुरा अरु तेस्रो व्यक्तिलाई सुनाउँदा त्यसले समस्या सुल्झने भन्दा पनि बिग्रने खतरा बढी हुन्छ । त्यसैले विवाहित पतिपत्नीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धका बारेमा तेस्रो व्यक्ति वा आफ्नो अति नै नजिक साथीसँग पनि त्यस्ता केही […]
यी १०० कुरा मनमा लिएर हिँड्नुभयो भने सफलता नै सफलता हुनेछ जीवनमा , पछाडी फर्केर हेरिरहन नपर्न सक्छ । मनमा राखेर पढ्नुहोला
२६ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:३६ April 9, 2018
LeaveaComment on यी १०० कुरा मनमा लिएर हिँड्नुभयो भने सफलता नै सफलता हुनेछ जीवनमा , पछाडी फर्केर हेरिरहन नपर्न सक्छ । मनमा राखेर पढ्नुहोला
१०० उत्प्रेरक भनाईहरू, एक पटक पढ्नुहोस तपाईको जिवनमा अवश्य परिर्वतन ल्याउछ । एजेन्सी । भन्छन् मानिसको टर्निङ्ग पोइन्ट एउटा हुन्छ रे, जीवनमा अनेकैं बाधाहरु आउने गर्छ । तेहि बाधाहरुको बिचबाट टर्निङ्ग पोइन्टको सुरुवात हुन्छ । हामीले जीवनलाई परिस्थिति अनुरुप फरक फरक तरिकाले परिभाषित गर्छौं । त्यस्तै यहाँ जीवनसंग सम्बन्धित प्रसिद्ध १०० भनाइहरु समावेश गरिएको छ, जुन […]